ရေငုပ်သင်္ဘောကိစ္စ သဘောထားကွဲလွဲနေစဉ် ဘိုင်ဒန်က မက်ခရွန်နှင့် ဖုန်းပြောရန် ပန်ကြား - Xinhua News Agency
အမေရိကန်နိုင်ငံသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန် နှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံသမ္မတအီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်တို့အား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဝါရှင်တန်၊စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အငြင်းပွားဖွယ် ရေငုပ်သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေးကိစ္စကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နေသော တင်းမားမှုအား လျှော့ချရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတစ်ရပ်အနေဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်သည် ပြင်သစ်နိုင်ငံသမ္မတ အီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်အား ဖုန်းပြောဆိုဆွေးနွေးရန် ပန်ကြားလိုက်ကြောင်း အမေရိကန်အရာရှိတစ်ဦးက တနင်္လာနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
နျူကလီးယားစွမ်းအင်သုံးရေငုပ်သင်္ဘောများ ထုတ်လုပ်ရန် ဩစတြေးလျနိုင်ငံအား အမေရိကန် နှင့် ဗြိတိန် နိုင်ငံတို့က အားပေးကူညီသွားမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်တွင် အမေရိကန် နှင့် ပြင်သစ်အကြား သံတမန်ရေးဆိုင်ရာ သဘောထားကွဲလွဲမှုတစ်ခု ပေါ်ထွက်လာသည်။ ထိုသို့ အမေရိကန် နှင့် ဗြိတိန်၏ ဩစတြေးလျနိုင်ငံအား အားပေးကူညီမှုသည် ပြင်သစ်နိုင်ငံက ဩစတြေးလျနိုင်ငံအား ရေငုပ်သင်္ဘော ထောက်ပံ့သွားမည့် သဘောတူညီချက်တစ်ခုကို ပျက်ပြားစေခဲ့သည်။
ထိုသို့ တစ်စုံတစ်ရာ အသိမပေးဘဲ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ပြင်သစ်က အမေရိကန် နှင့် ဩစတြေးလျရှိ ၎င်းတို့၏ သံအမတ်များကို ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ရန် သောကြာနေ့က နေရပ်တိုင်းပြည်သို့ အသီးသီးပြန်ခေါ်ခဲ့ကြသည်။
“ သမ္မတဘိုင်ဒန်ဟာ ရှေ့ဆက်သွားဖို့နဲ့ ပြင်သစ်ဟာ အမေရိကန်ရဲ့ မဟာမိတ်ဖြစ်ကြောင်း သူ့ရဲ့ကတိကဝတ်အပေါ် ပြင်သစ်သမ္မတမိုက်ခရွန်နဲ့စကားပြောဆိုဖို့ ပန်ကြားခဲ့တာပါ” ဟု တနင်္လာနေ့က ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဘိုင်ဒန်အစိုးရအဖွဲ့ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးတစ်ဦးက ဆိုသည်။
“ ပြင်သစ်ရဲ့နေရာကို ကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ် ၊ ဒါတွေအားလုံးဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာ သူတို့ရဲ့အမြင်ကို ကျွန်တော်တို့ မဝေမျှပါဘူး” ဟု ၎င်းအရာရှိက ဆိုသည်။ “ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အခုလို နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေ တိုက်ရိုက်ဖုန်းပြောလိုက်ခြင်းအားဖြင့် သိပ်ကိုအရေးပါပြီး အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်”ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
အမေရိကန်သမ္မတအိမ်ဖြူတော်ပြန်ကြားရေးမှူး Jen Psakiက တနင်္လာနေ့နှောင်းပိုင်းက ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခု၌ သတင်းထောက်များအားပြောကြားရာတွင် သမ္မတနှစ်ဦးအကြား ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသည်“ လာမယ့်ရက်အနည်းငယ်မှာ ဖြစ်လာပါမယ်” ၊ အဆိုပါဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
ဩစတြေးလျ ၊ ဗြိတိန် နှင့် အမေရိကန် သုံးနိုင်ငံအကြား AUKUS ဟုအမည်ပေးထားသည့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမိတ်ဖက်သစ် အဖွဲ့အစည်းကို စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်က ဖွဲ့စည်းပြီးနောက် အမေရိကန် နှင့် ဗြိတိန် နည်းပညာ ဖြင့် ဩစတြေးလျနိုင်ငံအတွက် နျူကလီးယားစွမ်းအင်သုံး ရေငုပ်သင်္ဘောများ တည်ဆောက်ပေးမည်ဟု ဆိုသည်။
ဩစတြေးလျနိုင်ငံသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်က ပြင်သစ်နိုင်ငံနှင့်ချုပ်ဆိုထားသော သမာရိုးကျ ဒီဇယ်စွမ်းအင်သုံး ရေငုပ်သင်္ဘော ၁၂ စင်း ဝယ်ယူရေး စာချုပ်ကို ဖျက်သိမ်းကြောင်း စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ ဥရောပ နှင့် နိုင်ငံခြားရေးရာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Jean-Yves Le Drian က သုံးပွင့်ဆိုင်လှုပ်ရှားမှုသည် “နောက်ကျောဓားထိုးမှုတစ်ခု” ဖြစ်ကြောင်း စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့ပြီး “ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဩစတြေးလျနဲ့ ယုံကြည်မှုဆက်ဆံရေးတစ်ခု တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီယုံကြည်မှုဟာ သစ္စာဖောက်ခံလိုက်ရပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
“ အမေရိကန်ရဲ့ အမူအကျင့်က ကျွန်တော့်ကို ပူပန်စေပါတယ်။ ဒီတစ်ဖက်သတ်နဲ့ဆိုးရွားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ အရင်က မစ္စတာ(ဒေါ်နယ်) ထရမ့် လုပ်ခဲ့တာမျိုးနဲ့ သိပ်ကို အလားသဏ္ဍာန်တူပါတယ်” ဟု ၎င်းကဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
WASHINGTON, Sept. 20 (Xinhua) — U.S. President Joe Biden is seeking to holdaphone call with his French counterpart Emmanuel Macron, U.S. officials said on Monday, an effort to reduce tensions caused byacontroversial submarine deal.
“President Biden has asked to be able to speak with President Macron to talk about the way forward, to talk about his deep commitment to the U.S. alliance with France,”asenior Biden administration official told reporters inacall briefing on Monday.
“We understand the French position, we don’t share their view in terms of how this all developed,” said the official. “We think that will be an important moment and opportunity for the two leaders to speak directly with one another.”
White House Press Secretary Jen Psaki told reporters inabriefing later Monday that the call would take place “in the coming days,” while noting officials are still working on scheduling it.
French Minister for Europe and Foreign Affairs Jean-Yves Le Drian on Thursday called the trilateral movea“stab in the back.” “We had establishedarelationship of trust with Australia. This trust has been betrayed,” he said.
“The American behavior worries me; this unilateral and brutal decision is very similar to what Mr. (Donald) Trump was doing,” he added.
SCO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ ” ငြိမ်းချမ်းရေး အစီအစဉ် ၂၀၂၁” ၏ ပထမဆုံး လက်တွေ့ပစ်ခတ်လေ့ကျင့်မှု